Home Wararka Doorashada waa Dagaal Ma Hurto Haddaan Fahad iyo NISA laga Saarin, RW...
Doorashada waa Dagaal Ma Hurto Haddaan Fahad iyo NISA laga Saarin, RW Rooble Ha Ogaado.
Runtii waxaa qof waliba maanta ku noqotay filan waa kadib markii uu RW Rooble ugu hambalyey hawsha uu Farmajo u qabtay wiilka uu abtiga u yahay ee Lafta Gareen kulana fadhiya kursiga Madaxweynimada K/G dhiig iyo qori caaraddii.
LaftaGareen waxaa uu yiri “Aniga abtigey dhiig ayuu ii daadiyey si aan kursigaan ugu fadhiisto, annna ka cabsan inaan dhiig u daadiyo sidii uu u soo noqon lahaa, waxaana sameynayaa waxkasta oo ujeedadaas lagu gaari karo”
Haddaba wiil waa abigiiye Wax ka ogow waxa uu falay Laftagareen uu Farmaajo ku fariisiyey kursiga dhiigga leh ee Koonfur Galbeed. Lafta Gareen dadka uu soo magacaabay waa liiska uu Farmaajo u soo dhiibay waxaana la hayaan meelaha ay ka so galeen iyo meesha ay ka soo jeedaan, halkaasna waxaa ka soo baxaysa sababaha loo keenaaday.
Qofkasta oo Somali ah maanta waxaa uu oghay in dalkaan u gali doono dagaal sokeeye oo kii hore ka xun haddii Farmajo talada uu ku soo noqdo si kasataba ha ku soo noqdee. WaayoFarmajo wuxuu xaataa dhaawacayin la aqabli karo inuu dalka hogaamiyo xataa haddii uu ku soo noqdo doorasho uu gacanta ku rimiyey, waxaana uu abuurtay cabsi weyn oo laga qabo isaga iyo Fahad xataa inay ragga ka furan doonaan haweentii ay la dhacaan, madaama ay afartii sano ee tagatay ay afduubteen gabdhihii ay ka heleen sida Ikran Tahliil iyo gabdhaha quruxda badan ee wada xijaaban ee reer Gadoodka ah oo hadda wada cabaadaya, kana dalbanaya RW Rooble inuu wax u qabto- Tolow ma waxbuu u qaban karaa nin haddaba horay hambalyo uga diraya nin kursi dhiig leh ku fadhiya kuna hanjabaya inuu dhiig daadin doono haddii Farmajo aanu soo noqon. Caawa yaa cabsi badan gabdhahaas RW Rooble wanaag ka sugaya? Maxaysa noloshoodu noqon doontaa haddii Farmajo u soo noqodo? Adiga iska qiyaaso.
Liiska Senator-da Koonfur Galbeed ayaan midi mid kuu tusineynaa halka uu ka soo jeedo ee nala soco:
Laba ka mid ah waxay qabaan gabdhaha uu dhaley taliyaha Asluubta General Mahad Shub, Waxayna halkaas la noqonayaan Lafta Gareen Owriyo Walaal oo waxaa looga taliyaa guriga Jen. Shub.
Aden Cabdinasir Maxamed (Hadame) wuxuu qabaa Anisa Mahad Cabdirahman oo ay isla dhasheen xaaska Lafta Gareen, Zamzam Mahad Cabdirahman, waxaa bedelayaa Senator Hussein Sheikh Mohamud oo ay cid waliba taqaanno qiimaha uu qarankaan u leeyahay .
Xusseen Maxamed Daahir (Boqol Hore) wuxuu qabaa Ilham Mahad Cabdirahman oo ay isla dhasheen xaaska Lafta Gareen, Zamzam Mahad Abdirahman, waxaa uu bedelayaa Senator Timiro.
Zamzam Ibrahim Cali (Jiido) waxaa qaba Suldan Warsame Ibrow oo ah Suldaanka Jiido iyadaana horey ugu fadhiday kursiga waana loo dhaafay markii Suldaanka laga saxeexay halka ay codka geyneyso.
Maxamud Maxamed Cabdi Garabey (Geeladle) waxaa uu ka tirsanaa waaxda dowladaha hoose ee Magaalada Baydhabo waxaana saaxiibo dhow ah Aabihiis & Lafta Gareen oo isagana waaa ballansan yahay inuu noqonayo will adeegsan.
Ayaan Adan Cabbdullahi (Xariin) waxay ilma adeer la tahay Lafta Gareen, waxayna bedeleysaa Senator Ilyas Cali Xassan oo kasoo jeedey beesha Eelaay.
Waxaa liiska tartanka laga reebay rag qiimo ku leh hannaanka dowlanimo iyo heerka ay soo gaartay K/Galbeed, waxaana halkaas ka muuqata ujeeddo cad oo boob ah.
Waxaasa intaan ka xanuun badan RW Rooble oo la filayey inuu u kaadiyo in wax u kaa caddaanayaan inuu hambalyo khaldan kula booday Lafta Gareen taas oo dhalineynsa:
RW Ma wuxuu qeyb ka yahay hanaanka iyo hagardaamada doorashada lala damacsan yahay ee la rabo in lagu soo celiyo Farmajo si dalka dagaal loo geliyo.
Ma aqoondarri siyaasadeed baa oo waxaa uusan fahmin dabinnada joogtada ee ay u dhigayaan Farmajo iyo Fahad.
Labada tii ay noqotaba waa ku ceeb RW roble inuu Lafta Gareen ugu hambalyeeyo boobka iyo ka reebista liiska murashaxiinta muwadiniin xaq u lahaa inay u tartamaan ka mid noqoshada aqalka sare ee dalka. Howshaan waxaa si xardeysan u fuliyey Fahad Yasiin oo aan isaga marnaba ka muuqanin shaashadda dambiyadana ku gala gacmo dad kale leeyahay.
Cabsida dhabta ah
Cabsida dhabta ah ee dhamaan Murashixiinta, Shacbiga iyo Villada inay ka welwelaan u baahan waxay ka soo muuqataa Hirshabeelle oo uu hadda Fahad ka wado dagaal aan waxba loo reeban oo bannaanka la dhigayo xildhibaanno hadda jooga si loogu badalo kuwa uu wato. Fahad waxaa uu rabaa xataa inuu isaga Kursi boob ah halkaas ka soo helo, wuxuuna rabaa inuu ka soo saaro senetarro iyo xildhibaanno lagu qoray guriga uu NISA ka dhex deggan yahay waayo waxaa soo baxday seddexdii habeen ee tagtay inay wada joogeen Jen. Shub oo shalay Baydhabo laga soo saaray wiilshaha Gabdhihiisa qaba inay D-M ugu mudan yihiin oo aysan arrintu dhaafi Karin guriga Cabdicasiis Lafta Gareen.
Laakiin xaalka dhibka leh ee uu dhiiggu ku daadan doono waa kuraasta H/Shabeelle, waayo dadka la rabo in la boobo waa dad wada hubeysan oo awood u leh inay dhacsadaan xaqooda, waana Sababta keentay in Cali Guudlaawe laga soo sheego inuu ku leyahay ciddii u tagta oo kursidoon ah “walaalow aniga ma rabo inaan dhibaato galo gursi haddii rabtid Fahad u doono, kuraastaan isagaa gacanta ku haya”. Ceeb iyo doqonimo ama caqli iyo is badbaadin middaan doonto ku sheege dhaqanka Guudlaawe.
H/Shabeelle waxaa la hubaa inay noqon doonto halka ay doorashada uu Rooble wadaa:
Ku najixi karto haddii uu Fahad eryo, si looga xayuubiyo awoodda faragelineyd oo ku imanaeysa hogaaminta hay’adda laga cabsado ee NISA kadib markii ay muujisay hay’adda inaysan ka warwreegeyn inay disho, afduubo, handaddo cidii ay doonto, cid wax ka qaban kartaana aysan jirin oo haddaba gabdho reer Xamar ah iyo kuwa reer Gadood ah dhiggooda lagu qubeystay welina ooynaya oo aan xataa cid dheg jalaq u siin.
Ay ku naafoobi karto oo la dagi karto dhammaan dadaalladii doorashada Xamarna ay toos ugu soo noqon karaa ciidankii loo bixiyey Badbaado qaran, kuwaas oo la arkay inay leeyihiin awood laga cabsado iyo kala dambeyn markii la amray uga baxay magaalada dadkuna ay aad u jecleysteen cududooda iyo edebtooda.
Marka RW Rooble ha qaato go’aan adag oo uu Fahad kaga saarayo saaxadda qaska doorashada, waxaa kaliya oo ay ku iman kartaana waa inuu Fahad ka dhigo shacbi si haddii uu rabo kursi uu uga raadsado H/Shabeelle.